रुपन्देही सुपर लिगमा लुम्बिनी कसाई क्लब विजयी ! | Cricket Himalaya |
रुपन्देही सुपर लिगमा लुम्बिनी कसाई क्लब विजयी !
By Cricket Himalaya Team Last updated Jun 20, 2018 1,195 0
जितका लागि गोलपार्कले दिएको १ सय ४६ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा लुम्बिनी कसाईले निर्धारित ४० ओभरको खेलमा ८ विकेट गुमाई १ सय ४९ रन बनाउँदै जित निकाल्यो । उसको जितमा म्यान अफ द म्याच समेत रहेका सुनिल धवलले नटआउट ६१ रनको योगदान दिए भने सुजित खनालले २३ र धु्रव कुर्मीले २० रन बनाए । बलिङमा गोलपार्कका सुरज थापा र संदीप बश्यालले समान ३/३ विकेट लिए ।
यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गर्दै गोलपार्कले निर्धारित खेलमा ३४ ओभर १ बलमा सबै विकेट गुमाई १ सय ४५ रनको योगफल तयार गरेको थियो । उसका लागि अरविन सारुले ७४, विनोद पाण्डेले २० र विक्रम मगरले १९ रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन । बलिङमा लुम्बिनी कसाईका रुपेश कुर्मी र अहम्मद हुसेनले समान ३/३ विकेट लिए भने अंकित शर्माले २ विकेट लिए ।
शुक्रबार साई ग्लोबल क्रिकेट क्लब भैरहवा र बुटवल युथ क्रिकेट क्लब बुटवलबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
प्रतियोगितामा जिल्लाका २१ क्लबको सहभागिता छ । प्रतियोगितामा विजेता क्लबले नगद ७० हजार प्राप्त गर्ने छ भने उपविजेताले नगद ३५ हजार प्राप्त गर्ने छ । यस्तै उत्कृष्ट खेलाडीले १० हजार, बेष्ट बलर र बेष्ट ब्याट्स म्यानले नगद ५/५ हजार तथा प्रत्येक दिनको म्यान अफ द म्याचले एक हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् । नेपाल टेलिकमले मुख्य प्रायोजक रहेको सुपर लिगमा बुम रेमिट्यान्स र नेपाल अम्बुजा सिमेन्टले सहप्रायोजन गरेका छन् । प्रतियोगिता फागुन २६ गतेसम्म चल्ने छ ।
Lumbini KasaiRupandehi Cricketrupandehi super league
नेपाल भर्सेस क्यानडा, टस जितेको नेपाल फर्स्टमा फिल्डिङ गर्दै
बालुवाटार क्रिकेट क्लब र केसिटिसि खुकुरी च्यालेन्जर्स टि-२० कपको फाइनलमा !